एक फ्ल्यास बिक्री के हो
फ्ल्याश बिक्री आउटलेट स्टोरहरूको भर्चुअल समकक्षहरू हुँदै
शुक्रवार, सेप्टेम्बर 28, 2012 बिहीबार, सेप्टेम्बर 27, 2012 Douglas Karr
के हो फ्लैश बिक्री? फ्ल्यास बिक्री एक छिटो छूट प्रस्ताव हो जुन चाँडै समयावधि सकिन्छ। ईकॉमर्स प्रदायकहरूले आफ्नो साइटमा दैनिक फ्ल्यास बिक्री प्रस्ताव राख्दै धेरै अधिक बिक्रीहरू ड्राइभ गर्न सुरू गरिरहेका छन्। उपभोक्ताहरू दैनिक फिर्ता आउँछ सम्झौता के हो भनेर हेर्नका लागि ... अधिक वस्तुहरू खरीद गर्दा, प्राय: के यसले काम गर्दछ?
वफादार ग्राहकहरु को साथ परिचित ब्रान्ड अब फ्ल्यास बिक्री को आकर्षण उपेक्षा गर्न सक्दैन। खुद्रा विक्रेताहरु आईटी डिपार्टमेन्टमा संलग्न नगरीकन वा धेरै समय र पैसा लगानी नगरीकन फ्ल्यास बिक्रीलाई तिनीहरूका अवस्थित वेबसाइटहरूमा एकीकृत गर्न सक्दछन्। मोनेटेट इन्फोग्राफिकबाट, फ्ल्याश बिक्री आउटलेट स्टोरहरूको भर्चुअल समकक्षहरू हुँदै
टैग: छुटछुटफ्लैश बिक्रीफ्ल्यास बिक्रीइंफोग्राफ़कआउटलेट
मोबाइल रिच मिडिया विज्ञापनमा के काम गर्छ?
B2B सामाजिक मार्केटिंग यूनिवर्स